Imfuyo ingagcinwa ngokulandelana ngezindlela ezihlukahlukene, kufaka phakathi ngokusebenzisa abelusi, izinja eziqaphayo, ama-alpaca, izimbongolo, izintshe kanye nobuchwepheshe obusha.
Umelusi noma umelusi kungaba yinye yezinto eziyigugu kakhulu kumlimi. Umalusi omuhle uzoba ngumuntu wemvelo, okwazi ukubona kalula ukuthi kukhona okuthile okungalungile ngesilwane futhi kungabangela ukucindezeleka okukhulu lapho ehlela nokuphatha imfuyo. Ngaphandle kokubukela isitokisi, bangase bavimbele phambili ukuvimbela isikhathi esidlule ngokugcina izicingo esimweni esihle futhi bathathe izinyathelo ezingaphezulu zokuvikela izilwane ezisengozini noma ezigulayo ngokumelene nezidumbu.
Kodwa-ke, umsebenzi odwa wodwa, odinga amahora amaningi ekhaya, ikakhulu lapho imfuyo ikhiqizwa ezindaweni ezinkulu. Ngakho-ke abantu abaningi abasafuni ukwenza lo msebenzi, okuholela ekutheni "ukufaka ulwazi" oluningi akusadluliswa kusuka kwesinye isizukulwane kuya kwesinye.
Ngokusho kwe-Predators kwi-Livestock Farms, ibhukwana elisebenzayo lomlimi lokuphatha okungelona olubulalayo, ukuphathwa kwezemvelo nokwamukeleka ngokwemvelo, okuhlanganiswa yiBool Smuts, ukusetshenziswa kwabalusi kungaphumelela impilo emisha emakethe emisebenzi ngokuhleleka kwezenhlalakahle, ezomnotho nezokungcola kwemvelo, ikakhulukazi uma umsebenzi uhambisana nezinzuzo ezinhle, ezifana nokwabelana ngenzuzo noma ukusebenzisana.
Abelusi, eminyakeni edlule, baye basebenzisa zonke izinhlobo zezinja ukuze babasize bavikele imfuyo abayidla. Izinhlobo ezihlukahlukene ze-hybrid zisetshenziswe ngempumelelo, ne-Turkey Anatolian Shepherd Dog njengenye yezona ezaziwayo kakhulu. Kulinganiselwa ukuthi inja enhle yokuqapha inganciphisa ukulahlekelwa kwesitoreji ngamaphesenti angu-90.
Lezi zinja ezisebenzayo, ezibekwe ngemfuyo emasontweni ayisithupha kuya kwengu-9 ubudala. Inja kufanele ihlale imfuyo futhi ingalokothi ishiywe yedwa emgodleni, ngisho noma imfuyo emibili kuphela ihlala nayo, ukuqinisekisa isibopho esiphakathi ne-puppy ethuthukayo nemfuyo yayo. Inja iyobe ingenalutho uma lesi sibopho singasunguli.
Ngenkathi kufanele bazi inkosi yabo, kufanele ifakwe esilwaneni ukuthi iwuqaphe imfuyo hhayi indlu, ipulazi noma abantu bayo. Inja akufanele futhi ivumeleke ukuba igijime idlale nemhlambi njengoba ikhula, ngoba lokhu kungalimaza izilwane. Izinja kufanele zijwayele nezinye imfuyo noma ezinye izilwane zezilimi, ukuzivimbela ukuba zingaboni lezi zilwane njengengozi.
Inja akufanele ivunyelwe ukuxosha umdlalo futhi ifundiswe ukubekezelela izilwane zasendle ezingasongeli. Ngeke ukwazi ukwenza umsebenzi wayo uma ifunda ukuzingela.
I-alpacas kufanele ikhuliswe ngemfuyo ukuqinisekisa ukuthi ihlakulela isibopho esiqinile nalezi zilwane. Uma isibopho sesiqalile, bayobe benakekela kakhulu ukujikeleza futhi bavikele indawo yabo futhi baxoshe, baphoxe, balume, bakhonze futhi baqede noma yiziphi izinsongo. I-Alpacas kufanele iqhutshwe ngokubili ngamabili, futhi igcinwe ama-250 amahhashi cishe ngamahektha angama-250.
Ezidlezinye eziFundeni zezilwane, ibhukwana elisebenzayo lomlimi, libika ukuthi i-alpacas ingandisa amaphesenti amawundlu ngamaphesenti angama-20 futhi unciphise ukulahleka kwangaphambili ngamaphesenti angaba ngu-80.
Ngenkathi izimbongolo zijwayele ukusetshenziselwa njengezilwane zepakethe, ziphinde zenze izilwane ezilondolozayo. E-Kenya, isibonelo, ziye zasetshenziselwa ukuvikela izinkomo ngokumelene nezingonyama.
Zinezinhlanzi ezinamandla zezinkomo, ngakho-ke zizohambela futhi zihlale emhlambini abaye bakhuliswa ngazo.
Ama-mares atholakala ngaphezu kwabesilisa, ngoba ama-stallions ahlaselwa eminye imfuyo futhi angase abangele nokulimala kocingo.